Home Wararka Al Shabaab oo madaafiic ku weerareen saldhig CXD ku leeyihiin deegaanka Biyo...
Al Shabaab oo madaafiic ku weerareen saldhig CXD ku leeyihiin deegaanka Biyo Cadde
Sida laga soo warinayo deeganka Biyo Cade Ururka Al Shabaab aya habeenkii xalay ayaa madaafiic aa kala go’a lahaynin ku weerareen saldhig ay ciidamada dowlada ku leeyihiin deegaanka Biyo Cadde ee gobolka Shabeellaha dhexe. Warka ayaa intaas ku dairy in ciidanka milatariga aysan wax khasaaro ah ka soo gaarin weerarka madaafiicda ah.
Sida ay sheegeen goobjoogayaal qaar kamida madaafiicda ayaa ku dhacay guri ay dad shacab ah ku noolaayeen waxaana ku dhaawacmay saddex ruux oo hal qoys ah. “Nin iyo xaaskiisa iyo ilmo yar oo ay dhaleen ayaa ku dhaawacmay waxaana loo qaaday magaalada Muqdisho” ayuu sarkaalka.
Sarkaal u hadalay ciidanka ayaa sheegay in deegaanka Biyo Cadde uusan lahayn wax isbitaalka ah dadka deegaankana ay bilaabeen in ay ka barakacaan deegaanka maadaama ay cabsi qabaan weeraro kale. Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ee ku sugan saldhigga deegaanka Biyo Cadde ayaa la sheegay in ay madaafiic ugu jawaabeen.
Ururka Al Shabaab aaaa u muuqda mid buuxda ula wareegayo qaybo kamida Gobolka Shabeeleada Dhexe. Wararka kale ee ka imanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Alshabaab ay la wareegeen deegaano hore ay ciidamada milatariga uga qabsadeen kadib markii ay ciidamada dowlada ay dib uga baxeen deegaanadaas.